सम्बन्धको जग आपसी विश्वास र बुझाईमा बस्ने गर्छ । त्यसमा किन धोका आउने गर्छ । किन एकै साथ काँधमा काँध मिलाएर हिड्नेहरु एक अर्कालाई धोका दिन पुग्छन् । महिला या पुरुष ‘धोका’ सबैले दिने गर्छन् । केही समय पहिले हफीङ्स्टन पोस्टले एक सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा प्रतिशत पुरुष आफ्नो महिला मित्रलाई धोका दिन्छन् ।
यो आंकडा पश्चिमी मुलुकहरुमा देखाइएको थियो । तर के हाम्रो यो समाजमा धोका हुँदैन र ? परिभाषित गर्ने तरिका फरक हुनसक्छ तर हाम्रो समाजमा पनि धोका हुने गर्छ । ठूलो मात्रामा हुने गर्छ धोका । तर एउटा सवाल कायम छ की आखिर धोका किन हुनेगर्छ । केवल सौखको लागि यस्तो कदम उठाइन्छ या धोका दिने पुरुषको प्रवृतिको हिस्सा हो ।
पुरुषहरुले धोका दिने कारणहरु
१. भावनात्मक असन्तोष
२. अलग काम गर्ने कोशिस
३. आदतहरुमा बुझाई नमिल्नु
कहिलेकाँही पति–पत्निबीचको आदत मिल्दैन । यस्तोमा कयौं पुरुष आफ्नो पत्निको आदतबारे अन्य महिलासँग सार्वजनिक गर्छन् । यस्तो सम्बन्ध साथीको रुपमा परिवर्तन हुने गर्छ र पछि दोस्रो महिलासँग सम्बन्धको रुपमा विकास हुन्छ ।
४. सहकर्मिको कारण
पुरुष जहाँ काम गर्छ त्यहाँ निकै धेरै समय व्यतित गर्नेगर्छ । यसको दौरान महिला सहकर्मीसँग लगाव बढ्नु नौलो कुरा होइन । कामको प्रक्रियामा कुनै पनि महिलासँग पुरुषको भेट हुनुपनि सम्बन्धमा कारक बन्नसक्छ ।
५. सम्बन्धको ताजगी नरहनु
सम्बन्धमा ताजापन हरायो भने, केही समयमै सम्बन्ध मर्नसक्छ । कयौं समय पति या पत्निलाई लाग्छकी उनीहरुको सम्बन्धमा तालमेल मिलेको छैन । उनीहरुबीच रोमान्सको स्थान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि पुरुष नयाँ सम्बन्धको खोजीमा लाग्नसक्छ ।
६. सेक्स जीवन
कुनैपनि जोडीको सेक्स लाईफमा केही समस्या हुन्छ । यस्तोमा गहिरो प्रभाव पुरुषको मनमा पर्छ र दोस्रो महिलाको बारेमा सोच्न थाल्छ ।
७. साथीहरुको कारण
साथीहरुको दबाबमा आएर कयौं पुरुष विवाहपछि पनि अफेयर चलाउँछन् र आफ्नो श्रीमतीलाई धोका दिन्छन् । केही पुरुषलाई आनन्दको रुपमा लिन्छन् । उनीहरुलाई यस्तो हुनुमा कुनै गल्तिभएको लाग्दैन ।
कुनै पनि सम्बन्धलाई अगाडी बढाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान विश्वास र प्रेमले पुर्याउँछ ।